Nyakupomerwa Mhosva yeKuponda Mupurisa Orovererwa neDzimwe Mhosva Mbiri
Mapurisa emuHarare anonzi apomera zvakare dzimwe mhosva mbiri kuna VaBarnabas Mwanaka, avo vari kutongwa neimwe mhosva yekuuraya mupurisa mukati meguta reHarare musi wa 29 Chikumi gore rino.
Gweta riri kumirira VaMwanaka, avo vanove wechidiki webato rinopikisa reMDC-T, VaTonderai Bhatasara, vanoti VaMwanaka vave kupomerwa zvakare mhosva yekurova mupurisa akavasunga pamwewo nekumuvhiringidza kuita basa rake.
Vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana pamhosva itsva mbiri idzi.
VaMwanaka vakasungwa neMugovera vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa, VaTalkmore Phiri, mumhirizhonga yekuratidzira kwakaitwa nevanotengesera mumigwagwa pedyo nemuzinda weMDC-T, weHarvest House.
Vakamiswa pamberi pedare neMuvhuro vakanzi vadzoke kudare musi wa 24 Chikunguru, unove mwedzi uno.
Asi gweta ravo, VaBhatasara, vanoti vatosvitsa magwaro kudare reHigh Court kuti vakwanise kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti VaMwanaka vatongwe vachibva kumba kwavo.
VaBhatasara vanotiwo VaMwanaka vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi, vachiti pamusi unonzi wakapondwa mupurisa ivo vakanga vasiri muHarare, asi kuti vakanga vari kuChegutu kurufu kwavakanga vaperekedza shamwari yavo.
Gweta iri rinotiwo rinofunga kuti kusungwa kwaVaMwanaka kune chekuita nezvematongerwo enyika, sezvo mupurisa akavasunga akavaudza kuti aizoda kuvapfidzisa nekuti aivaziva kuti ndeveMDC-T.
Dzimwe nhengo dzevechidiki veMDC-T dzinoti VaLast Maengahama, VaTungamirai Madzokere, pamwe naMuzvare Yvonne Musarurwa, dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri pamunhu mushure mekuwanikwa dziine mhosva yekuponda mupurisa, Inspector Petros Mutedza mumusha weGlen View muna 2011.